सिल्टल्ट स्वचालित कार्य स्क्रैपिंग प्रविधिहरू तपाईंको कार्यलाई कम गर्न प्रस्तुत गर्दछ
सामग्री स्क्रैपिंग एक इन्टरनेट बाट उपयोगी जानकारी निकाल्ने र यसलाई तपाईंको प्रकाशन आफ्नै वेबसाइट. विभिन्न वेबमास्टर्स र लेखकहरूले स्थापित ब्लगहरू र वेबसाईटहरू आफ्नो आफ्नै व्यवसाय बढाउनका लागि लेख लिन्छन्. उद्यमहरू, प्रोग्रामरहरू र वेब विकासकर्ताहरू पनि उनीहरूका कामहरू प्राप्त गर्न विभिन्न वेब स्क्रैप इन्जिन वा खनन सामग्रीहरू प्रयोग गर्छन्।. सबैभन्दा प्रमुख सामग्री स्क्रैपिंग प्रविधिहरू तल उल्लेख गरिएका छन्.
1: डोम पार्सिंग
डम वा कागजात ओब्जेक्ट मोडेलले HTML र XML फाइलहरू भित्र सामग्रीको शैली र संरचना परिभाषित गर्दछ।. DOM पार्सर प्रोग्रामरहरू र विकासकर्ताहरू द्वारा फरक वेब पेजहरूको गहन विचार प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ - personal property appraisers arizona. तपाइँ सजिलै संग वेब सामग्री निकाल्नको लागि DOM पार्सर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. XPath वांछित वेबसाइटहरू र ब्लगहरू स्क्रैप गर्न एक व्यापक उपकरण हो र मोजिला, इन्टरनेट एक्सप्लोरर र गुगल क्रोमसँग मिल्दो छ. XPath को साथ, तपाईं प्रोग्रामिंग कौशल को कुनै आवश्यकता को बिना एक पुरा या आंशिक साइट को सामाग्री स्क्रैप गर्न सक्छन्.
2: एचटीएमएल पार्सिंग
जाभास्क्रिप्टको साथ HTML पार्सिङ गरिन्छ. यो सामग्री प्रविधि स्क्रैपिंग प्रयोग गरी पाठ कागजात र पीडीएफ फाईलहरू निकाल्न प्रयोग गरिन्छ. यसले तपाइँलाई ईमेल ठेगानाहरू, नेस्ट लिङ्क वा अन्य समान स्रोतहरूबाट पनि डेटा प्राप्त गर्दछ. एचटीएमएल स्क्रेपर उद्यमहरूका लागि राम्रो विकल्प हो किनभने यसले तपाईंको लागि तीव्र गतिमा HTML कागजातहरू पार्स गर्न सक्छ.
3: ऊर्ध्वाधर संग्रहण
ठाडो एकत्रीकरण प्लेटफार्म डेवलपर्स द्वारा महान कम्प्यूटिंग कौशल संग बनाइन्छ. तिनीहरू तिनीहरूको तालिका अनुसार फरक तालिकाहरू र सूचिहरू र सार्थक सामग्री फ्याँकन्छन्. तिनीहरूमध्ये केहि काममा कामो लिनका लागि किमोनो ल्याब्स र अन्य समान उपकरणहरूमा निर्भर हुन्छन्. यो प्रविधिले तपाईलाई मात्र फाइदा ल्याउनेछ यदि तपाईं क्रलरहरू र बटहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ, र सामग्रीको गुणले यी बटहरू र क्रेलरहरूको दक्षतालाई उपाय गर्दछ।.
4: Google डक्स
Google स्प्रिेडसिटहरू सेवा स्क्रैपिंग गर्ने शक्तिशाली सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।. यो प्रविधि स्क्रेटरहरूको बीचमा प्रसिद्ध छ. Google डक्सबाट, तपाईंले चाहेको फाईलहरू आयात गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँका आवश्यकता अनुसार अनुसार स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ. साथै, तपाईं स्क्रैप गरिरहँदा सामग्री नियमित रूपमा जाँच र निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ.
XPath वा XML Path भाषा क्वेरी भाषा हो जुन HTML र XML कागजातहरूमा कार्य गर्दछ. किनकि यी कागजातहरू रूख ढाँचामा आधारित हुन्छन्, XPath चयन गरिएका वेब पेजहरू मार्फत नेभिगेटिङका ​​लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र सामग्रीको गुणस्तर जाँच गर्न मद्दत गर्दछ।. यसले एचटीएमएल र डोम पार्सिंगको साथ संयोजनमा वेबमास्टर्सहरूमा धेरै फाइदा दिन्छ, र सामग्री तपाईंको वेबसाइटमा तुरुन्तै प्रकाशित गर्न सकिन्छ।.
6: पाठ ढाँचा मिलान
यो एक अभिव्यक्ति मिल्ने प्रविधि हो जसले विकासकर्ताहरू र प्रोग्रामरहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ र रूबी, पाइजोन र पेरिल जस्ता भाषाहरूसँग क्लबबेड गरिएको छ।. तपाइँ यो सामग्री स्क्रैपिंग विधि लागू गर्न सक्नुहुनेछ कि ठूला साइटहरू पुरा तरिकाले वा आंशिक रूपमा स्क्रैप गर्न.
यी सबै सामग्री स्क्रैपिंग प्रविधिहरू गुणवत्ता परिणामहरू सुनिश्चित गर्छन्, र त्यहाँ CURL, HTTrack, नोड जस्ता उपकरणहरू छन्।. जे एस र विजेट जुन तपाईंको कामको सुविधाको लागि सिर्जना गरिएको थियो. तपाईले धेरै चाहानुहुन्छ वा धेरै साइटहरू निकाल्न सक्नुहुनेछ.